धरानमा दशैं, तिहारः सोझै ठगिएला है !::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा दशैं, तिहारः सोझै ठगिएला है !
दशैं, तिहारमा बढी किनमेलसँगै सर्वसाधारण ठगिने मौसम
धरानः सरकारको हलुका व्यवहारले बजारमा, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी, लत्ताकपडा, सवारी साधनदेखि अधिकांश सामानमा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । बजार अनुमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूला–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
खाद्यान्न, तरकारी, मरमसलादेखि चिनीसम्म बढेको छ । सरकारले महङ्गी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महङ्गीको मारमा परेकोपरयै छन् । सरकारले बजार अनुमगमन गरे पनि महङ्गी भने दिनप्रतिदिन अचाक्ली बढ्दै गएको देखिन्छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिएपछि उपभोक्ताको लागि आउँदै गरेको दशैं, तिहार, छैठमा महङ्गो हुने बजार भाउले नै प्रष्ट पारिरहेको छ । परल मूल्यमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भएपनि व्यापारीले १ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाने गरेको उपभोक्ताको अनुभव छ । यही कारणले गर्दा पनि आमउपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन् । उपभोक्ताको भान्छामा खपत हुने अधिकांश सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ ।
सरकारले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसक्दा बजारमा दिनहुँजसो मूल्य बढ्दै गएको हो । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलेमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपनि उत्पादन गर्ने किसानले भने उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
दशैं, तिहार, छैठजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले आएर ठप्प छ । सरोकारवाला निकाय अनुगमन गरेको बताएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले अनुगमनको कामलाई मौसमी नभई स्थायी संयन्त्र खडा गरेर नियमितरूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । बजार उपभोक्ता मैत्री नभएकाले उपभोक्तासम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तत्काल फिल्डमै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ ।
‘जब चाडबाडको क्रम सुरु हुन्छ, तब बजार गुल्जार हुन्छ, मौकामा चौका हान्ने पनि बढ्छन्, नुनदेखि सुनसम्म, लत्ता कपडादेखि घटना परम्परा नै बनेको छ’ धरान–१६ का पूर्ण लिम्बूले भने, ‘यसरी कहिलेसम्म ठगिइरहने ग्राहक ?’
हरितालिका तीजसँगै जुर्मुराउने चाडको लर्को कात्तिक अन्तिमसम्म चलिरहन्छ । यिनै ठूला चाडको मुख पारेर बजारमा कमाइ अनेकौं धन्दा शुरू हुन्छ । त्यसको मार भने सर्वसाधारण ग्राहक नै परेका छन्, ऋण गरेको होस् वा नगरेको नै किन नहोस् । अहिले तीजको लहर नै चलेको छ । दशैं, तिहार, छठजस्ता महत्वपूर्ण चाड भित्रिन एक महिना पनि छैन । स्वादिलो जिरा किन्नेहरूदेखि जहान–परिवारका लागि लुगाफाटो किन्नेहरूको भीड बढ्ने मौसम हो यो । उपभोक्ताको चाप बढ्दै गएपछि हरेक सामग्रीको मूल्य बढ्नु नियम होला तर, उपभोक्ताको उपस्थिति बाक्लिँदै गएपछि व्यवसायीहरू कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिदिन्छन् यो चाहिँ खतरा हो ।
‘यो ठगिने मौसम हो, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ’, धरान–१७ का सरिता चौलागाईं भन्छिन्, ‘नजान्ने र सोझा जनता त पर्ने नै भए, जान्ने पनि सहिद नै हुन्छन् । तर सम्बन्धित निकायले देखावटी बिकाहा बन्नु दुःखद् हो । निरीक्षण गर्नुपर्ने समय कानमा तेल हाल्ने र अन्य बेला तात्ने सम्बन्धित निकाय चाडबाड भित्रिनुअघि नै अनुगमनलाई तीब्रता दिनुपर्ने तर अनुगमन नभएको धरान–१७ का पूर्णिमा राईले बताइन् । ‘बजारमा लत्ताकपडा, खाद्यान्नको माग बढ्ने मौसम नै यही हो, यही बेला उपभोक्तामाथि ठगीको घटना बढिरहेका हुन्छन् तर नियामक निकायको कुनै प्रभावकारी भूमिका देखिएकै छैन । बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
यही समयमा झालझेल बढ्ने गरेको छ । छोटो समयमै कमाउने गलत शैलीले गर्दा पनि चाडबाडको मौका चौका हान्नेका लागि उपयुक्त बन्दै गएको छ । धरान त्यसै त फेसनेबल सहर हो । यहाँ कोरियालगायतका स्थानबाट गुणस्तरीय साथै टिकाउका कपडा पनि भित्रन्छन् । तर कपडाको मूल्य जहिल्यै बढ्छ ।
आयो चाडबाड ढोल बजाई, गयो चाडबाड ऋण बोकाई । यो कथन आजदेखिको होइन । सम्भवतः धेरै वर्षदेखिको हुनुपर्छ । चाडबाड भित्रिएसँगै नागरिक खुशी हुन्छन्, तर सकिएपछि रित्तोको रित्तो नै । ‘हुनेखाने वर्गका लागि दशैं, तिहारजस्ता चाडबाड रमाइलो भएपनि गरिब एवम् विपन्न वर्गका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातसरह बन्दै गएको अर्का उपभोक्ता सर्मिला तामाङले बताइन् ।
सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै अन्त्यमा ठगी र गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पिरोलिएका छन् । ‘धरानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने उपभोक्ता शोषण गर्नेमाथि तत्कालै ठूलो कारबाही हुन सकेको छैन’, धरान–१६ का माया लिम्बूले भनिन्, ‘अनुगमन गरिएको जस्तो मात्रै हुँदै आएको छ, यसले गर्दा पनि उपभोक्ता ठगी निरन्तर चलिरहन्छ ।’
मौसमअनुसार आउने चाडबाडमा निकायको फितलो अनुगमनले व्यापारीहरूमा पनि मौसमी चुस्तता देखाउने प्रचलन बढेको उनको कथन छ । यस्तो महङ्गीलाई रोक्नका लागि सरकारले जहिले पनि अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गराउँदै आएपनि प्रभावकारी नभएको गुनासो भने बढ्ेको बढ्यै छ । पर्वछेकोमा मात्रै अनुगमन हुनु दुःखद् भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालिसकेका छन् ।
समय–समयमा गरिने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, मूल्य नियन्त्रण, मिसावटमा थप सजगता, देखावटी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेजस्ता पक्षहरूलाई समाधान गर्न सके ग्राहक ठगिने क्रम केही कम हुने धरान–१५ का सविन वान्तवाको सुझाव छ ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन् धरानको बजार भाउ अनियन्त्रित छ, वस्तुको मूल्यमा मनपरितन्त्र हावी छ । उनले धरानको विकासको बाधकमध्ये यो पनि भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समृद्ध धरान बनाउने अभियानमा यस्ता कुराले पनि रोकेको छ ।’
केही वर्षअघि अब धरानमा हप्तामा एकपटक बजार अनुगमन हुने भन्दै प्रचारप्रसार गरियो । तर भनेजस्तो भएन । ‘हप्तामै भएपनि एकपटक बजार अनुगमन हुन्छ’, केही वर्षअघिका बजार अनुगमन अधिकृत दिवस अधिकारीले भनेका थिए, ‘चाडबाडमा मात्रै होइन अरूबेला पनि नियमितजसो नै हुन्छ ।’ जनशक्ति अभावदेखि कानुनको अभावसम्मले गर्दा नियमित बजार अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै उनले चाडबाडमा मात्र होइन नियमित नै बजार अनुगमन हुने बताएका थिए ।